About Us -. Ningbo Master Soken CO korontada, LTD
Riix Switch Button
Ningbo Master Soken korontada Co., Ltd. waa xubin ka mid ah agaasimaha a of China korontada Qalab Industry Association ku saabsan accessories korontada iyo laanta xakamaysada guriga. Waxaan nahay xirfadeed ee cilmi baarista iyo horumarinta, qorshaynta iyo soo saara noocyada kala duwan ee shido. waxyaabaha Our dhaxayn in daaro rookaha, biiro Rotary, daaro riix-button, daaro muhiimka ah iyo nalalka tilmaame. items waxaa si weyn loo isticmaalaa in dhinacyo badan ah sida qalabka guriga, goobaha warshadaha, qalabka isgaarsiinta, mitir iyo instuments la qalabkii qurxinta jirka-dhisidda iwm
Shirkadda Our waxa uu ku yaalaa garabka koonfureed ee Delta Yangtze River la luminayey dhaqaale, halkaas oo waa shan caan heerka A qaranka muuqaal dabiici ah rigoore Xikou Ningbo. Warshada ayaa waxay leedahay jawi taraysaa gaadiid aad u sahlan. Warshadda wuxuu qaadanayaa ilaa 16,000 mitir murabac oo sida dayrka iyo 25,000 mitir murabac oo waxbarasho. Shirkadda ayaa shaqaalaha ka badan 1000, oo ay ku jiraan R & D iyo injineerada technic ka badan 50 ay wax soo saarka ee sannadlaha ah waa in ka badan 150 milyan oo gogo '. Shirkadda Our waa in heerka koowaad ee walaalaha farsamada guriga.
Shirkadda Our maray nidaamka ISO19001 maaraynta tayada ee July, 1997 iyo passeded nidaamka maamulka ISO14001Environmental ee October, 2004. Nidaamyada noqday ka kaamilsan la wareegyada PDCA habka Ceaselessness. SOKEN sidii qori ah, waa Zhejiang brand caanka ah iyo Ningbo waxyaabaha caan-brand. Shirkadda dhisay shaybaar sidii caadiga ah kormeerka UL TUV. Inta badan waxyaabaha ay ka heli UL, VDE, TUV, ENEC, KEMA, K, CQC, ansixinta ammaanka CCCD iyo shahaadooyinka iyo RoHS-waafaqsaneyn.
Shirkadda waxay sii wadi doontaa in ay codsato in ay opinion maamulka "TAYO IYO ADEEGGA" iyo eryan hagaajinta kaamilka ah ee tayada adeegga buure. Waxaan rajaynaynaa in ay isku dayaan fiican si ay u qanciso dalabaadka macaamiisheena 'in shahaado maximal.